सातामा अन्तिम दिन १५ अंकले घट्यो नेप्से, ९३ करोड २२ लाखको कारोबार – Insurance Khabar
सातामा अन्तिम दिन १५ अंकले घट्यो नेप्से, ९३ करोड २२ लाखको कारोबार
प्रकाशित मिति : ६ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार १५:०९
काठमाडौं । आज सातामा अन्तिम दिन पनि शेयर बजार नेप्से परिसूचक घटेको छ । आज शेयर बजार १५ दशमलव ८२ अंकले घटेर २,२३५ दशमलव ०९ को विन्दुमा कायम भएको छ । आज ३८ कम्पनीको शेयर मुल्य बढेको छ भने १४२ कम्पनीको शेयर मुल्य घटेको छ । आज म्युचुअल फण्ड बाहेक सबै उपसूचक घटेका छन् ।
आज दिनभरिमा २२३ कम्पनीको २५ लाख २४ हजार २६८ कित्ता शेयर किनबेच हुँदा ९३ करोड २२ लाख ६ हजार रुपैयाँको शेयर कारोबार भएएको छ । आज सबैभन्दा धेरै अरुण कावेली पावरको कारोबार भएको छ । कम्पनीको ३ करोड २ लाख रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ । हिमालयन डिष्टिलरीको २ करोड ८४ लाख रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ । सिन्धु विकास बैंकको २ करोड ७६ लाख रुपैयाँ संस्थापक शेयर कारोबार भएको छ ।
नेपाल पुनर्बीमाको २ करोड ६९ लाख रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ । अपि पावर कम्पनीको २ करोड ६७ लाख रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ ।
आज सबैभन्दा धेरै सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताले कमाएका छन् । कम्पनीका लगानीकर्ताले २ दशमलव ७३ प्रतिशतका दरले कमाएका छन् । श्री इन्भेष्टमेन्ट फाइनान्स कम्पनीका लगानीकर्ताले २ दशमलव ५९ प्रतिशतका दरले कमाएका छन् । लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताले २ दशमलव १६ प्रतिशतका दरले कमाएका छन् ।
आज सबैभन्दा धेरै तेह्रथुम पावर कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाएका छन् । कम्पनीका लगानीकर्ताले ४ दशमलव ९४ प्रतिशतका दरले गुमाएका हुन् ।
नविल र बंगलादेश बैंकको एकिकृत कारोबार असार २७ गतेदेखि हुँदै
अजोड इन्स्योरेन्सको शेयर रजिष्ट्रारमा कुमारी क्यापिटल नियुक्त
सोनापुर मिनरल्सको १४औं वार्षिक साधारणसभा आब्हान
नेपाल डिपि लिमिटेडद्धारा डिम्याट र मेरो शेयरको वार्षिक शुल्क बुझाउन आग्रह
नेपाल लाइफ र एनआईसी एशियाको संस्थापक शेयर लिलामीमा विक्री खुला
ङादी ग्रुप पावरको शेयर मूल्य समायोजन
११ महिनाको व्यापारको आधारमा कुन नयाँ जीवन बीमा कम्पनी अघि ? (इन्फोग्राफ सहित )
सम्झौता गर्दैमा मर्ज हुँदैन्, मर्जर सफल हुन कति समय लाग्ला ?
हिमालयन हाइड्रोपावरको आइपीओमा १६ लाख २६ हजार ४३० जनाले दिए आवेदन